Angovo sy herin’aratra azo avy amin’ny masoandro any Madagasikara – Gasy Egypte
June 23, 2018 June 23, 2018 Mihaja Rasoanaivo
“Manomboka mitrandraka sy mikarakara izay misy eo am-pelatanany ny firenentsika ho fampandrosoana. Tena tsara ilay hevitra ary hita fa misy vokatra azo tsapain-tànana sy inoana fa haharitra saingy mbola mitaky ezaka goavana.”
Tokanana anio 23 jona 2018 ny toerana famatsiana herin’aratra azo avy amin’ny masoandro antsoina hoe “central solaire photovoltaïque d’Ihazolava” izay any Ambatolamapy no misy azy. Hanampy amin’ny famatsiana herin’aratra izay sahanin’ny orinasa JIRAMA moa izy ity. Tena nampitaraina ny maro ny fahatapahan’ny jiro matetika noho ity farany ka antenaina hitondra fanovana ny fisian’ity famatsiana vaovao ity.
Tsy vao voalohany ny foto-drafitr’asa toy itony any Madagasikara, raha ny marina dia ity notokanana anio ity no fahatelo amin’ireo izay efa miasa ankoatr’ireo mbola tetik’asa fotsiny ihany. Izy ity no tena lehibe sy matanjaka aloha hatreto satria dia 20MW (MégaWatt) hatramin’ny 25MW isan’andro no herin’aratra vokariny. Novatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola ny fanamboarana azy izay tafiditra ao amin’ny programan’asa “Scaling Solar”. Ny voalohany dia any Belobaka (Faritry Bongolava) no misy azy novatsian’ny fanjakana Amerikana vola satria tafiditra ao amin’ny programa ho an’I Afrika “Power Africa”. Ny faharoa dia ao Ankorondrano Antananarivo izay mamatsy ny 50% ny herin’aratra ilain’ny “hypermarché Jumbo Score – Centre commercial Zoom”, finiavan’ny tompon’ny orinasa manokana izy io fa kosa miatraika amin’ny andavan’androny Malagasy ny vokany.
Efa hatramin’izaho tany an-dakilasy no tsaroako fa manana ity karazana angovo iray ity I Madagasikara ho trandrahina fa taona maro aty aoriana vao tena mijoro ny foto drafitr’asa ary azo ampiasaina izany. Hita fa mikaroka sy manangana foto drafitr’asa maro ny fitondram-panjakana ho amin’ny tanjon’ny vina 2030: 70% ny Malagasy farany kely indrindra (au minimum) dia afaka ahazo famatsiana herin’aratra.
Ireo tombotsoa azo avy amin’ny karazana famatsiana herin’aratra toy izao:
Miaro tanteraka ary tsy manimba ny tontolo iainana
Raha oharina amin’ny fanamboarana “central électrique” toy ny any Andekaleka na Mandraka dia mora kokoa ny fananganana “central solaire” satria ny milina ampiasaina amin’ny ankapobeny dia ireo “panneau solaire” (maharitra an-taonany maro ny iray amin’izy ireny), ny teknisiana, toerana lehibe sady midadasika.
Tsy miafina ihany koa anefa na ny tombotsoan’ny mpanao politika na ny orinasa tsy miankina izay mbola lesoka tsy mampandroso ny firenentsika hatramin’izao. Nohon’ny foto drafitr’asa mitsangana dia mila sitraka ny mpitondra ankehitriny no sady miandry an’ilay hoe: “Tena mba nahavita kosa izy e…” ary mety mbola mikasa ny hanohy hatramin’ilay fisandratana 2030 aza. Nohafainganina tokoa mantsy ny fahavitan’ity central solaire ity mba hotokanana mialohan’ny fankalazana ny fetim-pirenena satria dia tokony amin’ny faran’ny volana jona vao vita. Tsara ny fahavitan’izany mialoha saingy mampametra-panontaniana hoe “Moa ve vita tsara?”. Henjehina ihany koa ny fanamborana sy ny fahavitan’ireo tetik’asa hafa toy ny làlana ohatra. Rehefa tsy manaraka ny fenitra amin’izay dia ho mora simba izy ireny ka dia nentina fotsiny ihany hanaovana propagandy hoy isika. Tamin’ireo central solaire telo efa azo ampiasaina ankehitriny dia orinasa iray no nanao ny roa amin’izy ireo izay orinasa frantsay (tsy ho soratako ato ny anarany). Ahoana moa no mba hahazoan’ny orinasa Malagasy traikefa rehefa tsy omena asa, antsoina izy ireo ameno ny lisitry ny mpifanina amin’ny fanamboarana (Marché d’appel d’offre) saingy tsy misy voaray fa ny vahiny foana no omena sehatra.
Mbola mila ezaka ny mangarahara, ny fananganana tetik’asa lehibe kokoa (tena mbola kely indrindra no vitantsika raha oharina amin’ny eto Afrika), ny miasa tsy hikatsaka ny tombontsoa manokan’ny mpanao politika na ny olom-bitsy fa mitsinjo ny Malagasy rehetra satria mendrik’izany izy ireo.
Filaharan’ireo “Central solaire photovoltaïque” eto Afrika araky ny tanjakin’ny herinaratra ho entiny:
100MW/jour en Ethiopie pour 2019 (travaux en cours depuis janvier 2018)
75MW/jour Afrique du Sud en 2016
33MW/jour Burkina Faso en 2017
30 MW/jour Sénégal en 2017
23 MW/jour au Tchad en 2017
20 MW/jour à Madagascar en 2018
12 Thoughts to “Angovo sy herin’aratra azo avy amin’ny masoandro any Madagasikara”
Then they hire copy writers and get it provided by him.
Usually your page rank, the valuable your site is.
We provide a simple guide steps to help you normally indicate. http://www.hat-heads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=casino-slots-guide.com%2Fways-to-win-more-at-the-online-casinos%2F
Propecia Schmerzen Forum Viagra 25 cialis Acquistare Kamagra Senza Rischi Amoxicillin Dosage For Bladder Infection Viagra Buy In Canada where to buy cialis online safely Brand Levitra Online I Want To Buy Alli! Magnesium Kamagra PiР С–РІвЂћвЂ“ Economico Propecia Shop Anonymous Acheter Cialis 20 Mg generic viagra Drug Interactions With Zithromax Cialis Prix En Suisse Online Zentel Pinworms In Germany Discount Cheapeast Fluoxetine Cod Accepted Price Free Shipping Kamagra Vs Silagra Levitra Tablets cialis online Acheter Priligy Pilules Best Place To Buy Viagara On Line Doryx Jenacyclin In Internet
Ed Pills From Canada All Top Meds Acheter Viagra Contre Remboursement cheapest cialis Viagra Kaufen Per Rechnung Cheap Generic Drugs From India
Buy Atomoxetine Viagra Ohne Rezept Landern Celilis viagra vs cialis Generic Progesterone Medicine Tablets
Propecia Overuse Viagra Le Iene cialis Amoxil Bleeding
Direct Progesterone Medication Mastercard Pharmacy Prescription Free Viagra Australia Levitra Femenina cialis 5 mg Viagra Receta Medica Rash Amoxicillin Child
France Ethylex How Long Before Amoxicillin Expires Amoxicillin Dose For 24 Lb Toddler comprar cialis generico barato Cialis El Mejor Online Pharmacy No Rx Viagra Trotz Bluthochdruck
Kamagra Kaufen Ohne Kreditkarte Cytotec France cheaper alternative to levitra Macrobid Antibiotic Cod Accepted Visa Pharmacy Loss Viagra Prescription Propecia Dosis
Ez Online Pharmacy Buy Viagra Usa cialis 5mg Priligy Sin Receta Espana Acheter Kamagra Livraison 24h Cystone
Cialis 20mg Suisse Rxhealth Cialis Bon Marche finpecia usa Cialis 5 Mg Collaterali
Acheter Du Viagra Rapidement Viagra Wann Einnehmen where to buy cialis online safely Zentel Without Rx With Overnight Delivery Pfizer Brand Viagra
Non Prescription Cialis Canada Virgra For Men levitra grossesse Prednisone For Dogs Dosage Chart Comprar Viagra Sin Receta.Canada Buying Cheap Flagyl Wholesale